Download sirboota qeerroo mp3 kan bara 2012 ðŸ‘ˆ
Download sirboota qeerroo mp3 kan bara 2012
By Kagagor 20.07.2021 20.07.2021
Qabsoon bilisummaa ummata Oromiyaa arra sadarkaa amansiisaa fii, if booda deebi'uun hin malle geeysee jirti. Arra sabni Oromoo guddaan akka arba ciisutti sodaatamaa ture, bahaa-dhihaa fii kaabaa-kibbaan if baree, waliis baree, arbummaa, bilisummaa fii abbaa biyyummaa Oromiyaa falmachaa jira. Qabsoon sadarkaa fii haala kana qabaachuu isii tiif wal'aansoo hadhooytuu, dheertuu, wareegama qaalii fudhattee tu gaggeeyfame.
Haala kanaan, amna wal'aansoo tan diiramaa keessatti guca dakkana tahuun warra xurree qabsoo bilisummaa ibsan keessaa tokko Abdurazzaaq ykn Gabbisaa dha. Akka umrii kaa'imummaa gayeen, haalli jiruu Gabbisaa naannoo itti dhalaterraa sossoosee magaalaa Hara Maayaa qubachiise. Hara Maayaa keessatti odoo hujii hodhaa huccuurratti bobbahaa jiru, namoota ifii dammaqanii hawaasa dammaysan keessaa tokko tahe.
Hujii isaa tanaan dafkaan buloota magaalaa Hara maayaa fii naannoo isii jiran lafa jalatti Oromummaan dammaysuu fii jaaruu irratti sossooha bara fii godhamaa ture keessatti qooda guddaa gumaache. Odoo tana keeysa jiruu, mootummaa Soomaalee tii fii tan Dargii jidduu lolli jalqabe. Haalli kuni, Dargii biraa taree, hortee nafxanootaa kanneen Minilik naannoo Baha Oromiyaa qubachiise garaa gubutti seene.
Biyya abbootiin isaanii dhunfata jala galchaniif Soomaaleen irraa fudhachuun jara haalaan dallansiise. Gochi isaanii kuni, sab-boonota Oromoo hedduu keessatti anaannata uumee, haala kana keeysa, qabsoo bilisummaa tiif hidhachuuf, karaa waraana Soomaalee yaase.
Sab-boonota haala kanaaf qe'ee deeman keessa tokko Gabbisaa tahe. Yaroo tanatti, Gabbisaan, nama bultii jaarrate, kan itti gaafatama haadha warraa malees, kan ilmaanii ceekhuurra qabu ture. Akkasumaa waliin, roorroo diinni saba isaarratti hojjachaa jiru arkaa fii dhageeytii jibbee, jiruu isaa tii fii tan maatii caalaa tan sabaa dursuun, mana oowwaa fii bultii bareeddutti duuyda galee, jalqaba baraqabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa tiif Hariirotti qaceele. Hariiro lafa Oromiyaa tan Hara Maayaa irraa fageenya km 78, timjii Soomaalee irraa km qabdu, tan yaroo sanitti waraanni Soomaalee qabatee, qarmaammee leenjii irratti jaarrate turte.
Gabbisaa fii kanneen waliin gamas deeman yaroo achi gayan, waraana Soomaalee tiin gaafii malee gammachuun simatamanii, leenjii toftaa lolaa hatattamaa irratti bobbaafaman. Akka barnoonni barbaachifamu kennamee fiin, Gabbisaan jaallan waliin dhaqanii fii kanneen achitti wal arkan waliin hidhannoo guutuun, Hariiroo-rraa ka'anii Jaldeessaa fii Eeguu keessa hulluuqanii, dhuma walakkaa baraSumsuma Muudaa qubatan.
Gabbisaa fii qabsaawonni akkuma naannoo san gayaniin, isaan keeysaa sayliin takka, waraana Soomaalee Sargoo irraa adda tahuu isaanii beeysisuuf, magaalaa Baatee-tti duulan. Garuu, rasaasota ballaa, warra boolla keessaa jaraan irraa dhukaafaman, keessaa gariin, Rabbi rahmanta haa godhuufii, lubbuu Dhaqqabaa Abbaas Baldaa fii Usmaanee ganda Daammotaa galaafatan.
Kaana booda, tarkaanfiin qabsaawonni dura fudhatan, Soomaalota saaminsaaf baadiyyaa keessa olii fii gad laban dhaabu ture. Warra maqaa daldalaa-tiin ooyrota nama keenyaa keeysa deemanii jimaa cabsan, qabeenya saamanii fii hawaasatti roorrisan, malaan Waaqatti galchuu jalqaban.
Haala kanaan, yaroo gabaabaa keessatti, ummata baadiyyaa naannoo sanii, roorroo Soomaalotaa irrraa hara baafachiisan. Baazuuqaa, qawwee, boombii, rasaasaa fii waan adda addaa, xiqqo xiqqoon jalaa mayfachuu hujii godhatan. Achiin Maayaa Qallotti boraafatan. Oduun qabsaawonni ajaja Sargoo jalaa if bilisoomsuu daftee biyya keessa facaate.Wednesday, April 15, About us Contact us Sirboota Ispoortii Kitaaba.
Awash Post Oromo News. Manniin barnootaa 32 ol keessatti qormanni kutaa 12ffaa hatameera. Filannoof baatii 9tu hafe. Finfinneen weerara lafaa qindaaye jalatti kufte. Dhaabbileen dhuunfaa PLC naannoleef gibira akka kaffalan murtaaye.
Qabeenyi biyyattii qisaasamaa jira; Pirojeektiin Shukkaaraa Xaanaa Balas kasaaraa qarshii biliyoonaâ€¦. Umriin keessan 30 osoo hin gayin duroomuu feetuu? Qabxiilee saglan kanniinâ€¦. All Barnoota Saayinsii Teknolojii. Itoophiyaan Interneetii danquu fi ugguruun addunyatti sadarkaa lammaffaa qabatte. Oromiyaa keessatti barnoonni sad. All Fayyaa fi Hawaasa Jaalala. Barattoonni Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataan dhuman.
Balaa tuulaa kosii Reephitti gayeen lubbuun galaafatame 65 gaye; achibuuteen isaaniiâ€¦. All Aadaa Bashannana Viidiyoo.
Sagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Toroontotti qopheessuuf.
Aabbush Zallaqee istuudiyoo fiilmii Finfinnee keessatti bane. All Atleetiksii Kubbaa miilaa. Atleet Eebbisaa Ijjiguu fiigicha Kanaadatti geggeeffame irratti Woyyaanee balaaleffate.
Home Sirboota Oromoo Haarawa. Sirboota Oromoo Haarawa! New oromo music by Tafarii Mokonnon "Ittu qabgssoo cimsaa. New afan oromo music Shimele too Asefa chala. Ka'i Ni Kaana'i!! Kamaal Ibraahim - Dubbii Lafaa Caalaa Bultumee Qeerransoo - "Maaster Pilaanii". New oromo music Aliyi Sabit - jabadhu qerroo. Shukri Jamal - Dinne! Nafiisaa Abdulhaakiim " Mimmi'eessituu Jaalalaa " new Oromo music video Gaaddisee Shamsaddiin Nama Gaddisiissaa.
Mootummaan Wayyaanees gocha uummata kanaan hedduu kan rifate sabboontota ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsee isin ABO waliin hidhata qabdu jechuunrakkisaa jiraachuun gabaafame. Sabboontoti Oromoo hanga ammaatti hidhaman keessaa 1.
Obbo Isheetuu Hurrisaa daldalaa 2. Umar Abduulqaadir barataa kutaa 12ffaa Mana hidhaa Wayyaaneetti kan ukkaamsaman yoommuu tahu uummatni hidhaa fi ajjeechaan haamilee nu kaasa malee haamilee keenya hin cabsu jechaa jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyaan alaabaa biyyattii Oromiyaa keessatti fudhatama dhabuun haala qorraa fi nuffisiisaan mootummaa wayyaanee haamilee kutee jira.
Godina Shawaa lixaa magaala Geedoo keessattis mootummaan Wayyaanee poolisii Tamasgeen Dhufeeraa jedhamu guyyaaalaabaatti alaabaa baattee deemuu didde,Ati miseensa ABOti jechuun mana hidhaatti ukkaamsee jira. Godina Iluu abbaa booraa,Jimmaa,harargee fi Wallaggaa keessatti wayita mootummaan wayyaanee alaabaa kabajna jechuun uummatni Oromoo alaabaan kun nu hin ibsu jechuun ayyaana kana fashalsee hojii mataa isaa hojjechaa oolee jira.
To this end the struggle of the Sidama and Oromo people have already costed countless life and a great deal of material destruction. Based on this foundation and fact, we the Youth Representative of Oromo and Sidama people, have meet from 24 â€” 26 October and discussed on wide range of matters concerning our people and the need for a common struggle against common enemy. Finally, the joint leadership have agreed on a prompt communication, coordinated resistance and toppling the current Ethiopian dictatorial government.
Humni tikoota Wayyaanee Onkoloolessa 27, galgala bakka ciisicha barattootaataa seenuun wallee warraaqsaa Artist Hirphaa Gaanfuree VCDn barattoota kaaniif raabisitaniittu,doormii keessattis bararttoota haaraa kutaalee biyyaa irraa University san seenan akka isaan argataniif jecha wallee adda addaa osoo kennitanii argamtaniittu jechuun yakkaman.
Barataa Hafiiz Abdullee fi barataa Qixxaataa Wagii jedhaman kun humnoota tikaan fuudhamanii erga doorsifamaniin booda akka lakkifaman gabaasi Qeerroo Dirree Daawaa irraa nu gahe addeessa. Ammaan duras Wallaga lixaa aanaa Airaa gullisoo fi University Miizaan Teeppii keessatti wallee Artist Hirphaa Gaanfureen wal qabatee barattooti hedduun akka hidhamanii turan beekamaa dha. Bara kaafnee waan keessa jirru akka gaariitti yoo xiinxalle, Oromoon siyaasaaf hin dhalannee?
Sabuma dhaabbanneef jennuuf of laannee hojjachaa jirraa? Diddaa Keelloo. Hawaasni Musliimaa kunneen dhaadannoolee dhageessisaa oolan keessattis. Hawaasni Musliimaa gaaffii mirgaa mootummaan wayyaanee dhimma amantii keessaa harka haa fudhatu jedhu gaafachuu erga kaasee yeroo hedduu lakkoofsisee jira.
Mootummaan wayyaanee gaaffii mirgaa kana dura dhaabbachuuf hawaasa musliimaa keessumaa gaggeessitoota kan tahan mana hidhaatti ukkaamsus hordoftootni amataa musliimaa yeroodhaa yerootti biyyattii keessatti Godina garaa garaa irraa gaaffii mirgaa dhiyeessaa turan. Uummatni mirga isaa sarbame gaaffiin hawaasni musliimaa kaasu gaaffii mirgaa tahuu hubachuudhaan hawaasa musliimaa cinaas dhaabbatnii gaaffii mirgaa akka dhiyeessan kakaasee jira.
Faransay,Makkanniisaa,Saaris,Buraayyuu fi kkf keessatti ifatti maxxanfamee jira. Dhugaan keenya hamma yoomitti dhokata? Yaa ALAH dhugaa keenya nuuf deebisi! Akkasumas Godina Jimmaa, magaalaa fi mooraa yuuniversitii Jimmaatti Qeerroon amantaa musiliimaa hordofan waraqaalee fincilaa waajjiralee OPDO fi mooraa keessatti mamaxxansuu fi bittimsuu isaanii Qeerroon gabaasee jira. Waraqaaleen halkan bittimsame kunis hidhattoota Wayyaanee rifaasisuudhaan ganama obboroo irraa kaasanii tikoonni Wayyaanee magaalaa Jimmaa keessa uummata musilimaa gidduuttii fi naannoo University heddumminaan buufatanii sochii namaa hordofaa oolan.
Diddaa fi fincilli Qeerroo fi ummataa kun sirna kabaja ayyaana kanaa waliin walqabatee, godinaalee Arsii, Gujjii, fi magaalaa Haromaayaa keessatti uummata Oromoofi saboota biroo dadammaqsuun akka ummanni harka walqabatanii qabsoo isaanii tinnisan hubachiisanii jiru.
Qeerroon godinaalee addaddaa keessa jiranis, ayyaana Musiliimaa kana waliin walqabsiisanii dhaamsa gamtaan dabarsan keessatti, hawaasti bakka jiru irraa barattoota, dargaggootaa fi sabboontota Oromoo waliin qabsoo isaanii otuu walirraa hin kutiin akka finiinsan dhaamanii jiru. Qabsoon itti fufa!! Gabrummaan ni kufa!! Bakka rakkoon ilmaan Oromoo mudatee fi uummata sidaamaa mudatetti wal taanee furuun akeeka keenya galmaan geessisuuf ni hojjenna. Saboota cunqurafamoo Impaayera biyyattii keessatti carraa wal fakkaataan isaan mudate waliin tahuun ni hojjenna.
Kan jedhan baafachuun yeroodhaa yerootti quunnamtii jabaan akka itti fufamuu fi diddaa wal fakkaataa mootummaa abbaa irree dhabamsiisee qaanqee bilisummaa fi walabummaa qabsiisu irratti hojjechuuf murtii irra ganyee jirra. Qeerroo Bilisummaa ibsa baase keessatti akka hubachiisetti, Fincila Diddaa Garbummaa Oromoo seenaa diddaa Oromoo kan karaa nagaatiin mirga ofii kabachiifachuuf kan eegalamee dha. Waraqaalee fi alabaa Oromoo bakkoota adda addaatti akka maxxansanii fi facaasanii jiran gabaafame.
Guyyaa kana dhimma kanaan wal qabatee barumsi manicha barumsaa ona Mattuu san irratti akka hin taane gabaasaan Qeerroo addeessa. Gabaasaa Qellem,Aanaa Gidaamii akka addeessuun gaafa Onkolooleessa 15 dhimma nageenyaan wal qabsiisanii mootummaan Wayyaanee uummata walgayii teessisaa ooluu isaa gabaasaan Qeerroo addeessa.Oromo News. African News. Formerly Oromia Quarterly. Kan Hora Finfinnee sababa Finfinneen dinaan qabamtee turteef waggaa f itti irreefachuun dhowwamee ture.
Kunoo injifannoon barana itti irreeffatame. Irreecha Finfinnee fi Bishooftuutti namoota milyoona 10 oltu qooda itti fudhate. Jaalaa, hariiroo fi firummaa Oromoo walii qabanisi ifatti ibsaniiru.
Both events were celebrated beautifully, successfully and peacefully. The Irreecha of love, peace, reconciliation and unity in diversity brought together diverse cultures, people and nations together. Irreecha is the most important event season in Oromo people national and cultural calendar. Naamusa sabni keenya Irreecha irratti agarsiise nama boonsa. Wal dhiibuu ykn wal darbachuun hin jiru. Namni wal dhagaha, wal kabaja. Bagan isinirraa dhaladhe! Irreechi Hora Finfinneetti waggaa booda kabajamaa jira.
Irreecha Taateewwan shan yaadataman keessaa. Irreecha vibe. Karrayu pic. In one Irreecha tradition, freshly cut grass and flowers are placed in water to thank God for the end of the rainy season and the beginning of spring. They chanted, sang and waved flags and flowers. City officials said they were expecting 10 million people to take part, though the final attendance figures are hard to estimate. Previously, the annual festival had been celebrated in Bishoftu, 40km 25 miles away, but similar gatherings have taken place in other parts of Oromia at different times of the year.
The move to the capital, which is surrounded by Oromia, is seen by some as a recognition of Oromo culture by the authorities. For years, Oromo people had complained of cultural and political marginalisation. Within the Oromos there are many different traditions associated with where people come from, and Irreecha brings them all together. The beadwork, known as chelie, that these women are wearing on their foreheads is common to all Oromos, but their clothes are typical of people from the Borena region.
These men made the km journey from Bale, in southern Ethiopia, to join in the festivities. Their headscarves, known as ruufa, are worn at any major celebration.
He has implemented radical reforms since coming to power last year following protests demanding more rights for ethnic groups. Irreecha in Finfinne will be Historical cuz it Happens there after yrs. Irreecha the last bishoftu pic. It is a great example of Ethiopians coming together in solidarity. Irreechaa Irreecha Oromia oromo Ethiopia love akkam babbareeddu qaanqeedhan teenna.
Best wishes to all those celebrating Irreecha, in Ethiopia and abroad, from all of us here at the Ethiopian Embassy in London.
Xx movi follx
Irreecha Irreecha pic. Ethiopia's largest ethnic group, the Oromowhose language, culture, beliefs and history has been banned by Abyssinians.
Howver, this week Oromo destroyed a year old ban on their Irreecha festival been hosted in Addis Ababa. Historical indeed and inevitable. Ethiopia pic.
Waggoota tokko dura kan gaggeeffame baayinniuummataa kan baranaa dachaadhaan akka dabale uummata kumaatama hedduudhaanlakkaawaman hirmaachise jira.Waraabbiin suuraa kan jiru akka nu gaheen dhaamama. Qeerroon Godina Booranaa aanaa Areeroo keessatti argaman walitti dhufuun dhimma qabsoo irratti marii jabaa taasisan jiran. Tarkaanfiin AraaraaABO fudhate hamilee Qeerroo fi qabsaaota duraanii haalaan kan kaasee fi boqonnaa haaraa qabsoo bilisummaa Oromoon gaggeeffamu akka fidu beekamaa dha.
Qeerroon aanaa kanaas hojii Qabsoo Bilisummaa Oromoof kan tahu qarshii dhibba jaba tokko tokkoon isaanii qarshii shantama walitti qabatanii jiru.
Gumaatni barbaachisaanii fi adda durummaan akka isaan eeggatus dhaamanii jiru. Baratotni Mana barumsaa Geedoo Sadarkaa 2ffaa kun gaaffii mirga abbaa Biyyuummaa kaasuun Motummaan abaa irree Wayyaaneen mirga barattoota Oromoo fi walii gala ummata Oromoo haala daangaa darbeen miidhaa waan jiruuf gochaa isaa kana irraa akka dhaabbatu jechuun hanga bulchiinsa mana barnootaatti deemuu fi iyyaan sagalee dhageessisuun dhiheefachuu isaanii dhagahame.
Kana malees dhaabni Wayyaaneen tolfame OPDOn waggoota 21 kana keessatti dantaa Wayyaaneef jecha ummata Oromoo miidhaa turan amma illee itti fufanii waan jiraniif miidhama Oromoo kana kana booda waan teenyee ilaallu miti,OPDOn s gochaa kana irraa hatattamaan dhaabbachuu qabdi jechuun sagalee diddaa dhageessisuun gabaafame. Haala kanaan kan rifatan bulchiinsi magaalaa fi qondaaloti Wayyaanee OPDOn barattoota Oromoo sossobuuf jecha gaaffii keessan sadarkaa mootummaatti dhiheessuuf Kaawinsilii bakka buaa barattootaa isinii ijaarree gaaffiin keessan achiin haadhagahamu ammasitti gaaffii mirgaa jettanii hin kaasiina jechaa turan.
Kun kana taee osoo jiruu Qeerroon mana barnootichaa bakka buaa mataa keenyaa waan qabnuuf isin nuu ijaaruu hin dandeessan yaada jedhu sagalee diddaa guutuun itti iyyuun deebisan. Aadaa,duudhaa,Afaan,Afoolaa fi seenaa saba Oromoo balleessuuf shirri mootummaan Wayyaanee hin yaalle hin jiru.
Ilmaan Oromoo garuu aadaa fi seenaa isaa guddisuu irratti guyyaa tokko itti aaragalfatee hin beeku.
Fiilmiin kun wayita ilaalamutti waraanni federaalaa fi waardiyaan yuunivarsiitii keessa bittinnaaus sabboontotni barattoota Oromoo waalleewwan Korma Guduruu. Oromoon Leencuma durum,Tokkummaa. Haaluma wal fakkaatuun gochaan diinummaa Wayyaanee barattoota Oromoo irraa kan hin dhaabbannes Yuunivarsiitii Amboo keessaa Barataaa Electrical Engineering waggaa 2ffaa kan tahe Barataa Gaaddisaa Dirribaa ati Qeerroo ijaartee diddaaf qindeessaa jirta maqaa jedhuun tikni mootummaa wayyaanee mana hidhaatti ukkaamsee jira.
Roorroon hammaatus aadaa fi afaan keenya,Seenaa fi duudhaa keenya guddisaa fi beeksisaa bilisummaa hanga gonfannu diddaa irraa hin dhaabbannu jechuun Qeerroon gad jabeessee dhaammata. Ayyaana Hulluuqoo Nairobi, Kenya keessatti gidduu kana kabajame irratti ilamaan Oromoo gaaddisa Oromummaa jalatti hojii boonsa adalaganii jiru. Ummanni naannichatti argamanis sirboota aadaa Oromoo Booranaa fi walleelee warraaqsaa wallisuun guyyicha haala howwaa fi gammachiisaan dabarsu Qeerroon gabaasa.
Baratootni Oromoo kunis maqaan isaanii 1. Barataa Tamiruu Tafarraa Barataa Seeraa waggaa 4ffaa, 3. Ibsoota isaanii keessatti ijoolleen ukkaamfaman kun hatattamaan akka gadhiifamanis tuqanii jiru. Kana malees guttummaa godinichaa keessaattii waraqaaleen Qeerroo ergaa Waamichaa FDG qabuu maxxanfamaafi raabsamaa jiraachuun hubatamee jira.
Jedheen jalqaee qubee koo baradhee B. Biyyan dhabee ture, seenaa irraa hubadhee C. Cunqursaa halagaa hamma yoonaa baadhee Cha. Che jedhchaa diinotaa uleedhaan owwaadhee. Y G Qabsoo Oromoo yeroo dheeraaf gaggeeffamaa jirutti xumura gochuu hanqachuunwaggoota Qabsoon Oromoo itti gaggeeffamaa ture keessawaan hawwiine dhabneewaan ofiif hin hawwiine nu mudachaa jiraachu irraaUmmata Maalii abaarsa qabnaayii?
Qabsoon dheerachuu isaaf, sababaa diinaa irra kan ofii keenyaa tau hundatu irratti walii gala. Rakkoo jiru waliin jiraachuun ykn waan hara taaa jiru kana yeroositti qoricha itti barbaachu irrakabeebsaa deemuundheerachuu qabsoo kanaaf sababaa hangafaatii.
Siyaasa keessatti waan hundaa kan caalu, waan nama mudatu irraa barachuudha.
Humni waan isa mudatuu fi quunnamu irraa barateejabiina isaa itti fufaa, dadhabiina isaa hin sirreeffatiin, eessallee hin gau. Guutummaan ibsa kanaa. Torbaan darbe keessas baratootni filmii ilaaluu dhiisanii Waraqaa warraaqsaa raabsuu fi Sirbotaa nama kakasuu sirbuun FDG nurraatti kaasaan, kanaaf iyyuu Filmiin afaan Oromoo hin agarsifamuu jechuun dhorkaan, kana sababbeeffaachuun goototni baratoota Oromoo, Sirna Abbaa irree Adaa fi Afaan sabaa keenyaa akka hin guddaannee fi Oromoon jireenyaa gadoo keessaa akka jiratu kan gochaa jirtu, hubachuun diddaa cimaan duraa dhaabbatan, Filmiin kunis duraa dhaabbaannaa baratootaan ilaalame, wayita Filmiin kun ilaalamuttii Qeerroon gaaffiilee mirgaa hiree murteeffaannaa Oromoo baratootaa keessaa facaase, saboontotni Oromoos sirbotaa Warraaqsaa sirbuun diina akka qaanessan qeerroon gabaasa.
Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Dillaa keessatti baratan gahee Oromummaa QBO keessatti isaan eeggatu bahuuf Gaheen nurraa eegamu dirqama bahumsa keenyaan raawwata maree jedhuun walitti dhufuun dhimma QBO irratti marii jabaa gaggeessan.
Sabboontoti Oromoo Yuunivarsiitii Dillaa yeroodhaa gara yerootti sababa Oromummaa qofaan barnoota irraa ariiamaa,adamsamaa kanneen turanii fi hidhamaa turan,Ammas itti jiran yaadachuun miidhaan bara baraan cunqursaan hiriyyaa hin qabne saba Oromoo irra gahu akka dhaabbatuuf kakaumsi ilmaan Oromoo maraa murteessaa dha jedhanii jiran. Guyyaa FDG sadaasa 9 Doormii keessatti dungoo diimaa magariisa diimaa qabsiisuun mariin kun kan beellamame yoommuu tahu marii isaaniis ibsa ejjennoo baasuun xumuranii jiran.Oromo News.
African News. Formerly Oromia Quarterly. Haaluma wal fakkatuun Odaa Bulluqii fi Malkaa sabbataatti umman Oromoo irreeffatanii oolani. Naqamte, Haroo Adiiyaatttis Sadaasa 8 bara haala gaariin irreeffatame.
Over one million people in attendance. Sababni isaas guyyaan addaa Oromoon hawwii guddaan eeggatuufi bakka guddaa kennuuf Irreechi Malkaa waan kabajamuufi. Egzibishiniifi baazaariin, konsariiwwan muuziqaa, agarsiifni aadaa, mariin paanaaliifi wantoonni ayyaanicha miidhagsan addaddaa kan gaggeeffamaa turanis torbanuma darbe keessa ture.
Qophiin haala kanaan miidhagee adeemsifame kunis xumura isaa kan argatu Dilbata ture. Gaafsis ilmaan Oromoo bakka addaddaadhaa dhufan aadaafi faayaa Oromootiin miidhaganii, harkatti marga jidhaafi keelloo qabatanii, sirba aadaa sirbaa ture kan gara Hora Arsadeetti imalan. Ilmaan Oromoo malees namoonni biyya keessaafi alaa ayyaana miidhagaa kana ilaaluuf dhufaniiru. Inni biraan ayyaanicha adda godhu misiroonni 25 abbootii Gadaatiin eebbifamanii cidha isaanii raawwatachuu isaaniiti.
Irreechi Ayyaana Galfannaa Oromoo waggaa waggaatti, xumura gannaa fi itti gala Birraatti ayyaaneffafu. Biyyoota alaa tii garuu, torban dabre kana jalqabe. Irreechaa, Hara Artemesia irratti ayyaaneffame irratti, ijoollee xixiqqoo dhaa jalqabee haga maanguddootaatti Oromoota hedduu tu argame. Kabajaa Ayyaana Irreechaa kanaan wal-qabatee, Hayyoonni Oromoo Ayyaana Irreechaatiifi maalummaa Irreechaa irratti waraqaa qorannoo dhiheessuudhaan hirmaatotaaf hubannoo uumaneeran.
Waaqa Akka amantii Waaqeffannaatti, Waaqni uumaa waa maraati. Hin dhalu, hin dhalchu, kan hin dulloomnee fi hin duune jiraataa bara baraati. Waaqeffannaan amantii Waaqa tokkichatti buluu fi amanuudha. Waaqeffannaan amantii waggoota oli turee fi osoo amantiiwwan kanneen akka Kiristaanaa fi Isilaamaa gara gaanfa Afrikaa hin seeniin dura kan ture, amantii ummata Kuush isa duraa fi hundee amantiiwwan maraati. Waaqeffatoonni seera uumaa fi uumman qajeelfamuu. Kabaja Waaqaf, jaalala uumamaf qabaachuu, dubbii hamaa fi cubbuu irraa fagaachuu fi lagachuun hundee amantichaati.
Gama biraan hordoftoonni Waaqeffannaa amantii fi aadaa saba biraaf kabajaa qabaachuu, elaa fi elaameen waliin hojjechuu qaban. Sirna Waaqeffannaa keesssatti, sabni Oromoo uuumaa isaatif Irreessa galchuun iddoo guddaa kennaaf. Amantii fi Aadaan waan hedduun walkeessa jira ykn walitti hidhataadha.
Sabni ykn biyyi hundi amantii hordofuu fi aadaa jabeeffatu qaba. Kanneen lamaan akkaataa wal hin faallesiineen ittiin jiraatan. Yoo bilisa hin taane garuu, kan ofii gatuun aadaa warra isa gabroofateen liqimfama jechuudha. Egaa ayyaanni irreechaa, kaleessa ykn waggoota digdamman darban keessa kan uumame osoo hin taane, amantii Waaqeffannaa waliin kan ture, aadaa Oromoon Waaqaa fi Uumaa isaa kan ittiin galateeffatuu fi isa fuulduraaf immoo kan itti kadhatudha.
Ayyaanni Irreessaa akka duudhaa ganamaatti, ilmaan Oromoo naannoo jiraatan hundatti haalaa fi yeroo adda addaatti raawwatu. Yeroo ammaatti Irreechi aadaa moo amantiidha? Akkuma olitti ibsame aadaa fi amantiin waan hedduun walitti hidhata.Sirna kana kabajuuf jecha sabboontotiin Oromoo Oromiyaa bakka gara garaa irraa kan fageenyaa fi dhihootti araman hedduun irratti argamanii qophicha adda godhanii jiru.
Addatti dargaggoonni Oromoo guyyaa jala bultii isaa irraa kaasanii haala addaan hirmaannaa isaanii muldhisaa haajiraatan malee mootummaan Wayyaanee ayyaanicha fashalsuuf jecha humna waraanaa heddumminni isaa kan ummata irreechaaf bahe gadi kan hin taane gara kanatti bobbaasuun ayyaana kana fashalsuuf yaalii guddaa godhe. Gama biraan video lee fi suuraaleen qindaayan gariin loltoota Wayyaanee fudhatameera.
Kan hafe ammoo yeroo gabaabaa keessatti qindeessuun akka ummata keenyaan geenyu dhaammanna. Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa! Gabaasaa godina Qellem,Ona Anfilloo Fulbaana 28 addeessuun gaafa guyyaa Fulbaana 26 kaee maqaa ABOtiin shakkii fi sodaa ABOn biyyaa galuutiin kan kae Aanaa Anfilloo keessaa kaabinoonni wayyaanee uummata goolaa jiraachuu isaanii gabaasaan Qeerroo addeessa.
Kana irratti hundaauudhaan addatti ati ABO dha jedhanii, ABO biyya galchuudhaaf daandii qopheessaa jirta,akkasuma miseensummaaf namoota jiraa jirta,yakka kana kanaan qabsiisanii barataa Kaliifa jedhamu barnoota isaa xumuree hoji dhabuu irraan kan kae naannoo Gabaa Kamisaa maatii isaa bira osoo jiraatuu gaafa guyyaa gaafa Fulbaana 26, maatii isaa biraa qabamee ukkaamfamuun bakka gahe hin baramiin jira.
Kana malees barattoota magaalaa Aana Anfilloo, Muggi naannoo gabaa kamisaa keessaa heddumminaan waajiraalee bulchiisaatti yaamanii akka qorataa jiran gabaasi qeerroo addeessa. Walumaa gala Qeerroon godina Qellem irraa gabaasaa dhaamaa jiru sodaanii fi raafamuun mootummaa jabaatee dhufuu irraan kan kae barattootaa fi uummata yakka tokko malee yakkuu fi gooluu irra akka jiran gabaasaan dubbata.
Akkasuma lafa qonnaa jalisii kan taee uummata irraa fuudhanii abbaa qabeenyaatti gurgurachaa akka jiran gabaasaan addeessa. Bifa gorsaatiin qabanii lafuma ishee qabdan xaaoo fudhaati seeraan itti gargaaramaa isayyuu xaaoo kan hin fudhanne yoo tae lafti isin qabdan martiyyuu isin irraa fuudhama, kanaaf lafa isin irraa fuudhame dhiisaatii isa qabdan waliif hiraa, biyya keenya misoomsina investii goonaa jedhanii uummata gowomsaa akka jiran gabaasan addeessa.
Lafa qonnaa kanneen biroo ammoo bosona dhaabnaadhaan uummata irraa ariaa akka jiran beekama. Qeerroon kana irra dhaabatee uummata ofitti qabuudhaan diddaa isaanii akka cimsaniif uummata gorsaa fi qajeelina adda addaatiin cina dhaabbachaa aka jiru gabaasan jiru addeessa.
Fulbaana 26, Finfinnee Mootummaan Wayyaanee yeroo irraa yerootti dabballoota isaa ummata keessa bobbaasuun yaadota fedhii ummataa waliin wal hin gitne facaasaa ture. Godina Wallaggaa aanaa Ayiraa Gullisoo keessatti baatii jahaa oliif dabballoota naannoo sanii fi Qeerroo jidduutti rakkoon uumame itti fufee yeroo ammaa kana humni poolisa Wayyaanee dabballota isaa tumsuuf jecha qeerrootti bobbauun hiraarsaa akka jiru gabaasi nu gahe addeessa.
Fulbaana 25, irraa kaasee hanga ammaa magaalaa Ayiraa keessa dargaggoota Oromoo jiraatan mana irraa manatti adamsuun hiraarsaa kan jiru humni hidhataa Wayyaanee Oromoof gara laafina akka hin qabne muldhisa, miseensii fi qondaalli OPDO Tashoomee Darajjee kan jedhamu magaalicha keessa deemuun dargaggoota gabaasuu fi qabsiisuu akkasumas hiraarsuutti akka jiru beekamee jira.
Haala kanaan kan mufate ummanni Oromoo naannichaa diddaa fi sagalee mormii isaa dhageesifachaa akka jiru qeerroon naannicha irraa gabaasa. Gama biraan Godina Shawaa lixaa aanaa Walmaraa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Wal maraa keessaa mootummaa Wayyaaneen yakkamee ukkaamfamuun mana hidhaa Wayyaanee keessatti bara darbe kan darbame ture barataa Geetuu Dhaqqabaa erga hidhaa irraa gadhiifamee gara gabatee barnootaa isaatti deebiuuf yeroo gaafatu ati diina mana barumsaatti hin deebitu jedhanii mana barnootaa akka dhorkan beekame.
Hoogganaan mana barumsaa kanaa Abbabaa Haayile Maariyam ajaja mootummaa Wayyaanee irraa kaee akka barataa kana mana barnootaatti hin deebifne tauu ibsee jira. Godina Jimmaa keessatti diddaan ummataa jabaatee itti fufuu qeerroon godinichaa gabaasa.
Erga muumicha ministera Wayyaanee jijjiramee ummanni Oromoo akka OPDOn aangoo hin qabnee fi baroota 21 gutuu ummata Oromoo goyyomsaa turanii fi aangoo Oromoo biyyoolessa irratti muldhisuu akka dadhaban kallattiin itti himuun walgahicha irratti afaan qabsiisanii jiru. Ofii iyyuu angoo hin qabdan maal nu gowwomsuuf kaatanii? Oromoon lamuu isiniin hin goyyomu walgahi keessanis hin hirmaannu jechuun walgahicha dhiitanii bahuu isaanii qeerroon godinicha irraa gabaasa.
Kana malees Anaa Limmuu Shaayii keessaatti hidhattonni Wayyaanee dirqamaan dargaggootaa walgahii baasuuf bobbaafaman dargaggotaan reebaman, dargaggoonnii Oromoos milishoota humnaan ummata doorsisuu fi reebuuf dhaqan irratti tarkaanfii of irraa ittisuu taasisan. Ummaannii Anotaa kkaa Geeraa,Saqqaa Coqorsaa, Deedoo, Gommaa ,Aggaaroo Maannaa, Aseendaaboo fi Shabee Buusii Gibiraa addaa addaa fi maallaqaa Waaldaa Liqii fi qusannaa Oromiyaa irraa Liqeeffatanii Ummataa irraa jiru Uummaannii hin kanfalluu, Ofii keenyaafuu Mootummaa hin qabnu enyuttii kaffallaa jechuun diddaa kaasaa jiraachuun hubatame, ergamtoonnii Wayyaanee Ummataa kanaa tasggabbeessuuf sossobaa jiirtuullee ummaannii diddaan of irraa deebisaa jirachuun ibsame.
Ololli dagachiisaan kun gonkumaa fudhatama kan qabuu miti. Kanayyuu tahee ammoo jijjiirraan amma irraa ololamaa jiru ulaagaa jijjiirraa sirna mootummaa kan guutu akka hin taane eenyuyyuu ni hubata. Jijjiirraan imaammata sirnichaa osoo hin taane maqaa namaa qofa jijjiiruu irratti xiyyeeffate kun kan ummatoonni cunqurfamoon, keessattuu ummatni Oromoo abdii irra kaayyatanii miti.
Barcuma Mallas kan dhaaleefis, deemsa bulchiinsa abbaa irrummaa fi. Jijjiirraa Hundeetu furmaata. Qeerroon aanaa kuyyuu Qeerroo shawaa kaabaa fi magaala Hoolotaa walitti fiduun dhimma qabsoo Oromoo irratti mariiatanii jiran. Dargaggoonni naannoo kanaa QBO qeerroo fi ummata Oromoon galma akka gahu hubachiisuun ibsa ejjennoo baafatanii jiran.
QBO hanga galma gahu wareegama barbaachisaa ni baasna 2. Qeerroo Oromiyaa irratti ijaaruun gaaffii mirgaaf ni kakaasna 3. Mootummaa abbaa irree Wayyaanee aangoo irraa buusuuf ni hojjenna 4. Qaama qabsoo bilisummaa mootummaa abbaa irree wayyaanee buusu hunda waliin ni hojjenna 5.
O hubachiisuun qeerroo waliin hiriirsuuf ni hojjenna 6.
45 minute power yoga sequence
Pulsar ns 220 top speed
La foret aizenay 85
Capitolo 4 principi di modulazione numerica
Zulkijar on Download sirboota qeerroo mp3 kan bara 2012
©2020 Download sirboota qeerroo mp3 kan bara 2012